सपनामा टिका लगाएको देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस् - IAUA
सपनामा टिका लगाएको देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
ramkrishna April 10, 2021	सपनामा टिका लगाएको देख्नु
यदि तपाइँ विहानै उठ्ने वित्तिकै तपाइँको अनुहारमा चमक देखियो भने त्यसलाई शुभ संकेत मानिन्छ। किनभने हरेक राम्रो काममा मन प्रशन्न हुन्छ। र यसको असर सबैभन्दा पहिला अनुहारमा देखिन्छ। यदि तपाइँको घरमा कुनै जनावरले आँपको कोया छोड्यो भने त्यो निकै राम्रो मानिन्छ। के पनि भनिन्छ भने, यदि बाँदर र बिरालोले आँपको कोया तपाइँको घरमा ल्याएर छोड्यो भने झन शुभ मानिन्छ। र यसले घरमा खुशियाली आउँछ। यदि तपाइँले पाउने पैसा तपाइँलाई दिने व्यक्तिले अचानक दिएर गयो भने त्यो निकै शुभ मानिन्छ। त्यसको भएको खण्डमा लक्ष्मी माता खुशी भएर तपाइँलाई आर्शीवाद दिएको मानिन्छ।
यदि तपाइँले अपनामा भवगान शंकर, विष्णु, लाटोकोसेरो, सूर्योदय र निधारमा टिका लगाएको र कुनै राजालाई सपनामा देख्नु भयो भने निकै राम्रो मानिन्छ। किन भने यी व्यक्तिले जीवनमा सुख शान्ति ल्याउँछन्। यदि तपाइँको झुकाव अचानक अध्यात्मतिर जान लाग्यो र तपाइँको भवानप्रति श्रद्धा बढ्यो भने तपाइँले चाँडै राम्रो समाचार सुन्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाइँले विहानै दूध वा दूधबाट निर्मिट परिकार देख्नु भयो भने र खानु भयो भने तपाइँको घरमा सम्पन्नता आउने छ।
यदि कुनै व्यक्तिले तीन चार पटक सपनामा सुनौलरंगको सर्प देख्यो भने त्यो निकै शुभ मानिन्छ।यस्तोमा व्यक्तिलाई धन लाभ हुन्छ। र काममा पनि सफलता मिल्छ। विहानै घरबाट निस्किँदा नजिकै उखु देखियो राम्रो मानिन्छ। त्यसले तपाइँको जीवनमा उखुको रसजस्तै मिठास आउँछ भने अचानक धन प्राप्त हुन्छ।
Previous Previous post: सपनामा कमिला देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
Next Next post: सपनामा कुकुर देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्